La Kala Dheere Se Orod Maha
Bulshada somaliland guud ahaan waa ummad isku mida wixii dhib iyo dheefana si isku mida u saamayso.
Markaad u kuur gasho nolosha dhaqan dhaqaale iyo saamaynta ay ku leedahay dawladnimo waxaa kuu soo baxaaya kala duwanaansho wayn, deegaan ahaan marka loo qaybiyo bari iyo galbeed.
Bariga markaad joogtid waxaad arkaysaa deegaano aad uga danbeeya ama aan u diyaarsanayn sidii ay ugu jihaysan lahaayeen wax wada qabsiga iyo horumarinta adeegyada aasaasigaa, waa bulsho aan isku xidhnayn wax ka dhaxeeyaana aanu jirin.
Galbeed markaad ku sugan tahay waxaad arkaysaa bulsho isku xidhan kana go’an tahay inay wax wada qabsaan, wax badan oo nolosha bilow u ahna qabsaday.
Markasta waxaa waajiba cidii dawladnimada hagaysaa inay ilaaliso door wayna ka qaadato dheeli tirka wixii horumara ee deegaanaada loogu talo galay iyo Isku wadka bulshada, xukuumadda talada haysa ma qabo inay deegaan gaara u sadburisay, bulshadaase kala dheeraysay deegaanbaa weelkoo la yimaadabaa xaqiisa loogu shubaa.
Qorshaha dhaqaale ee xukuumaddu waxay muhiimada 1aad siisaa nabadgalyada, deegaankii nabadiisa kala shaqeeya xukuumadda wixii dhibaato ku keenaya dhinac uga soo wada jeesta dhaqaalihii loogu talo galay waxay uga faa’idaystaan horumarka kale, halka deeganada qaar qorshaha iyo awoodda dawladnimo la isugu geeyo xasilinta iyo nabad galyada.
Xukuumaddu ma dhamaystiri karto nabad galyo aanay diyaar u ahayn dad deegaanku ilaa dadka deegaanku dantooda gartaan soorta gal maaha inuu ka hana qaado horumar kale.
Xaaladda maanta ayaa go’aamin doona mustaqbal beri caruurta iyo deegaankuba waxay calfan doonaa sida uu ugu taliyo ka maanta joogaa.
Naasir aadan dooc